एकदमै दुब्लो, पातलो र कमजोर हुनुहुन्छ ? यी चीज खाईदिनुस्, ५ दिनभित्र आफैँ हेर्नुस् चम’त्कार ! – Annapurna Daily
एकदमै दुब्लो, पातलो र कमजोर हुनुहुन्छ ? यी चीज खाईदिनुस्, ५ दिनभित्र आफैँ हेर्नुस् चम’त्कार !
On Aug 12, 2021 29,914
एजेन्सी । कोहि व्यक्ति जस्तो खाना खाए पनि फुर्तिलो, बलियो, जाँगरिलो र मोटो हुन्छ भने कोहि व्यक्तिहरु भने जति सुकै प्रोटिनयुक्त वा सन्तुलन खाना खाए पनि एकदम दुब्लो, पातलो र कमजोर हुन्छ।
बिहानको खाजा देखि बेलुकाको भोजन सम्म मिलाएर खाँदा पनि अत्ति नै दुब्लो र वजन कहिल्यै नबढ्ने समस्या प्राय व्यक्तिमा देखिन्छ ।
आज हामी प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेटले भरिपूर्ण यस्तो अद्भुत खानेकुरा वा चीज बताउन गइरहेका छौँ, जसको सेवन गर्नाले तपाइँको वजन केहि हप्तामै बढेर शरीरलाई स्फुर्त, बलियो, जाँगरिलो र मजबुत बनाउँछ। यो तौल बढाउनको लागि १०० प्रतिशत प्रभावकारी आयुर्वे्दिक घरेलु उपाय हो ।
१. यी हुन् चमत्कारिक घरेलु चीज, साबुदानाको खीर र आलु: कसरी खाने? हरेक दिन दुधमा साबुदाना मज्जाले पकाएर खीर बनाएर खाने गर्नुहोस् । यसले शरीरमा उर्जा प्रदान गर्नुका साथै जस्तोसुकै पातलो मान्छे पनि बलियो, मोटो र मजबुत हुन्छ । त्यस्तै दोस्रो चीज हो आलु ।
यसको लागि ३ ओटा ठुलो ठुलो आलु उमाल्ने । हरेक दिन यसरी उमालेको आलु खानुहोस्। आलुमा भरपुर मात्रामा कार्बोहाइड्रेट हुन्छ जसले पातलो वा दुब्लो व्यक्तिलाई फुर्तिलो र स्फुर्त बनाई शरीरको तौल बढाउँछ ।